China Agaro oligosaccharide fekitori uye vagadziri | HQG
Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide ine zvimwe zvakasarudzika zviitiko, senge anti-oxidation, anti-kuzvimba, anti-hutachiona uye kudzivirira colitis, nezvimwewo Chigadzirwa chinotorwa nekugadziriswa nesainzi yekugadzira tekinoroji, mhando yacho inonyatsoenderana nenyika uye EU mureza. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaccharide ndiyo mhando yeoligose ine degree re polymerization (DP) ye2 ~ 12 mushure mehydrolysis, iyo ine yakaderera viscosity, yakasimba solubility, yakakwira inotonhora nzvimbo uye yakanyanya chiitiko.
Semhando yegungwa polysaccharide, yakajairika agar ine yakakwira viscosity uye yakadzika mvura solubility, isiri nyore kupinza, saka ishoma kwazvo mukushandisa. Asi iyo agaro-oligosaccharise nekudzikisira, ine kugadzikana kwakanaka mumvura, inobatsira muviri wevanhu kuti unwe, kwete chete ine hunhu huzhinji hweanoshanda oligosaccharides, zvakare ine zvakawanda zvemuviri maficha izvo zvisingakwanise kutsiviwa neyakajairwa oligosaccharide, senge yakasimba anti -cancer, anti-oxidation, anti-anogumbura chiitiko, kuora kusagadzikana uye kusagadzikana starch kuchembera, ndeimwe yeanonyanya kukurudzira kugona kweoligosaccharides.
1. Mhedzisiro yematumbo probiotic
Fujian Global Ocean Agaro-oligosaccharides inogona kuwedzera bifidobacterium uye lactobacillus, ichipfupisa nguva yekukura yekugadzirisa mabhakitiriya anobatsira, ichikurudzira kuwanda kwekukurumidza. Iyo ine kuramba kwekuzeya neepamusoro matumbu enzyme. Mushure me24H yekurapa neepamusoro utachiona enzyme, angangoita ese oligosaccharides haana kukanganiswa neamylolytic enzyme. Iyo haigone kugayiwa kana kunyudzwa nedumbu remudumbu uye inogona kusvika kune iro rakakura ura.
2. Nyorova uye chena
Fujian Global Ocean oligosaccharides yakaratidza yakanaka hygroscopicity uye yaive nemimwe mhedzisiro mhedzisiro.
Nesimba rayo rakasarudzika mukudzivirira zviitiko zve monophenolase uye diphenolase ye tyrosinase, inogona kudzikisira kuumbwa kwemelanin muganda uye iine chiitiko chinodzivirira. Naizvozvo, inogona kuwedzerwa muzvizoro sechinhu chinochenesa.
3.Anti-bundu uye immune kukurudzira
Iyo inodzivisa kugadzirwa kwemasero ekenza nekudzivirira chiitiko chemarara maseru senge gomarara remudumbu, gomarara rechiropa uye gomarara redundira, uye nekudzivirira kugadzirwa kweprostagladin PGE2 nekukonzera kubviswa kwethumba necrosis factor TNF-α, zvichidaro ichitadzisa kugadzirwa kwe gomarara maseru.
4. Bacteriostatic mhedzisiro
Seyakanaka kuchengetedza kuchengetedza, ine yakasimba bacteriostatic mhedzisiro uye inogona kunyatso kudzora kugadzirwa kweanokuvadza emabhakitiriya makoloni kana iko kusungwa kwasvika 3.11%. Iyo inochengetedza inoumbwa neagarobiose iyo inogona kushandiswa kuchengetedza chikafu uye chinwiwa chitsva uye zvinobudirira kudzivirira ayo mavara shanduko, huwori uye oxidation.
5. Anti-kuzvimba mhedzisiro
Kugadzirira kwemuromo kunogona kudzivirira nekubata chisingaperi rheumatoid arthritis, isina cytotoxicity. Iyo zvakare inodzivisa kugadzirwa kweNO (yakawandisa nitric oxide inokonzera rheumatoid arthritis), iyo inogona kushandiswa kudzivirira uye kurapa chirwere chisingaperi chinoputira senge arthritis.
Anticancer zvinodhaka: Enzymatic hydrolysis yakashandiswa kuwana iyo oligosaccharide. Mushure memazuva gumi nemashanu ekuyedza mbeva, zvakaonekwa kuti muyero wekudzivirira we64mg / kg oligosaccharide pamakenza maseru yaive 48.7%.
Chiropa chekudzivirira chinodhaka: Iyo yepakati mamorekuru agaro-oligosaccharide (ML) inogona kuchengetedza chiitiko cheSOD uye GSH-PX, uye iine yakanaka yekudzivirira mhedzisiro pane kukuvara kwechiropa.
Mushonga wemwoyo: Agaro-oligosaccharide ine simba rakakosha pakuvharirwa kweangiogenesis, iyo inonyanya kukonzerwa nekusimudzira apoptosis yeumbilical vein endothelial masero uye ichivharira iwo maseru kutenderera muchikamu cheS.
Mishonga inorwisa-kupisa: Kudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvisingaperi zvekuputira senge rheumatoid arthritis.
2. Chikafu chine hutano
Zvigadzirwa zvemukaka: Agaro-oligosaccharide haina kugayirwa nemudumbu wemudumbu, asi inogona kusimudzira kukura kwebifidobacterium uye lactobacillus mabhakitiriya maviri akadaro anobatsira mudumbu remudumbu, uye inodzivisa kukura kwemabhakitiriya anokuvadza akadai se enterococcus, nekudaro ichivandudza hutano hwemugamuchiri. Iyo mhando nyowani prebiotic. Kukura kwekusimudzira mhedzisiro yeagar-oligosaccharides pane maprobiotic kwaive nani pane iyo yepectin-oligosaccharides.
Kuchengetedzwa kwechikafu: Zvinodzivirira
Agar-oligosaccharide rudzi rwezvisikwa zvinochengetedza, izvo zvinogona kuchengetedza chikafu uye chinwiwa chiri chitsva uye zvinonyatso kudzivirira rayo shanduko, huori uye oxidation. Kuzadza mumiririri: Agar-oligosaccharides inogona kushandiswa sekuzadza nekuparadzira nekutapira kwakanyanya nekuti haina kuora nehutachiona hwemukati uye ine yakasarudzika inogona kuenzaniswa nemamwe maoligosaccharides.
3. Kushanda kwekudya
Mari yakawedzerwa yaive 0.05% ~ 10% yehuremu hwese hwechikafu. Zvinoenderana neyetsika bvunzo, hutachiona, kusagadzikana kwezvirwere, kukura kwehuwandu uye kupona kwehove senge tilapia, shrimp senge South American chena shrimp, shellfish uye crab zvakagadziridzwa zvakanyanya zvichienzaniswa neboka rinodzora. Agaro-oligosaccharide yakanaka yakasikwa feed yekuwedzera.
Iyo inouya kubva kune yakachena yakasikwa yegungwa, iyo isiri-chepfu uye yakachengeteka kushandisa. Izvo zvakakodzera kuti ibatanidzwe pamwe nezvimwe zvinoshandiswa seyakawedzera cosmetic yekuwedzera. Zvakare, iyo oligosaccharide ishuga isina kwayakarerekera, isina huwandu hwakawanda hwemapoka ehydroxy muzvikamu zvayo, uye inogona kusanganiswa nenhamba huru yemamorekuru emvura kuti iumbe hydrogen zvisungo. Naizvozvo, iyo oligosaccharide ine yakanaka hygroscopicity. Kubudikidza nekudzivirira kusangana kweiyo oxidation ye tyrosinase, kuderedza kuumbwa kwemelanin muganda uye kuchenesa ganda.
Tarira: iyo viscosity paramende ndeye 1.5% mhinduro pasi pe100 ℃.
Pashure: Pakarepo Soluble Agar
Zvadaro: Semi yakanatswa Carrageenan